နေ့တိုင်းမေးသင့်သော မေးခွန်းနှစ်ခု | မာသင်
မနက်ကို မေးရန်မေးခွန်းတစ်ခု …..
ညပိုင်းတွင် မေးရန် မေးခွန်းတစ်ခု …..
နေ့တိုင်း မေးခွန်း (၂) ခု မေးသင့်သည်။
မနက်ပိုင်း တွင် … မေးရန်
(၁) ဒီနေ့ ဘာတွေ လေ့လာချင်သလဲ ?
နေ့ တစ်နေ့ကို ထိုမေးခွန်းနဲ့စကြည့်ပါ။ အဲဒီနေ့က ပိုပြီး အကျိုးရှိစွာအချိန်ကို အသုံးချမိတဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး နေ့စဉ် အကြောင်းအရာ တစ်ခုမဟုတ်၊ တစ်ခု ကိုလေ့လာသင့်တယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိဖြစ်ပေမယ့် …
အသိကို အသိမှာပဲ ထားပြီး လက်တွေ့လုပ်ဖို့နည်းလမ်းလိုနေလို့ပါ။
ဒါကြောင့် … မှတ်စုစာအုပ်မှာ မနက်ခင်း ကို စာတစ်ကြောင်း ချရေးပြီး စတင်ကြည့်ပါ ။
ဒီနေ့ဘာတွေ လေ့လာချင်သလဲ ?
ညပိုင်းတွင် … မေးရန်
(၂) ဒီနေ့ဘာသင်ခန်းစာတွေ ရလိုက်သလဲ ?
သင်ခန်းစာဆိုတာ ယူတတ်ရင် နေ့စဉ် ရှိပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်း၊ နားထောင်ခြင်း၊ ဗွီဒီယို ကြည့်ခြင်းတွေကနေ သင်ခန်းစာရတတ်သလို၊
ကိုယ်လုပ်မိတဲ့ အမှားကနေလဲ သင်ခန်းစာ ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် .. သင်ခန်းစာကို စိတ်ထဲမှာပဲ မထားမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
လူအများစုက ရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာကို စိတ်ထဲမှာ ပဲ ထားတတ်ပါတယ်။
စိတ်ထဲမှာ ပဲ ထားတော့ .. အဖိုးတန်တဲ့ သင်ခန်းစာက ၂၈ ရက်အတွင်း တဖြည်းဖြည်းမေ့ပျောက်သွားပါတယ်။
သင်ခန်းစာ ဆိုတာ ချရေး ရပါတယ်။
ချရေးထားတဲ့ မှတ်စုစာအုပ်ကို မကြာခဏဆိုသလို ပြန်ဖတ်ရပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်မှ … သင်ခန်းစာ ဆိုတာ ယူတတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မှာ လုပ်ငန်းဆောင်တာကနေ ရတဲ့ သင်ခန်းစာဆိုတာ ရှိသလို၊ နေ့စဉ် လူနေမှုဘဝမှာလဲ သင်ခန်းစာဆိုတာ ရှိပါတယ်။
သင်ခန်းစာဆိုတာ …အဖိုးတန်တယ်ဆိုရင် သေချာချရေးထားပါ။
ယူတတ်မှ … ရပါတယ်။
မနက္ကို ေမးရန္ေမးခြန္းတစ္ခု …..
ညပိုင္းတြင္ ေမးရန္ ေမးခြန္းတစ္ခု …..
ေန ့တိုင္း ေမးခြန္း (၂) ခု ေမးသင့္သည္။
မနက္ပိုင္း တြင္ … ေမးရန္
(၁) ဒီေန့ဘာေတြ ေလ့လာခ်င္သလဲ ?
ေန့ တစ္ေန ့ကို ထိုေမးခြန္းနဲ ့စၾကည့္ပါ။ အဲဒီေန ့က ပိုျပီး အက်ိဳးရိွစြာအခ်ိန္ကို အသံုးခ်မိတဲ့ ေန ့တစ္ေန ့ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို ့အားလံုး ေန ့စဥ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုမဟုတ္၊ တစ္ခု ကိုေလ့လာသင့္တယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိျဖစ္ေပမယ့္ …
အသိကို အသိမွာပဲ ထားျပီး လက္ေတြ့လုပ္ဖို႔နည္းလမ္းလိုေနလို ့ပါ။
ဒါေၾကာင့္ … မွတ္စုစာအုပ္မွာ မနက္ခင္း ကို စာတစ္ေၾကာင္း ခ်ေရးၿပီး စတင္ၾကည့္ပါ ။
ဒီေန ့ဘာေတြ ေလ့လာခ်င္သလဲ ?
ညပိုင္းတြင္ … ေမးရန္
(၂) ဒီေန ့ဘာသင္ခန္းစာေတြ ရလိုက္သလဲ ?
သင္ခန္းစာဆိုတာ ယူတတ္ရင္ ေန ့စဥ္ ရိွပါတယ္။
စာဖတ္ျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း၊ ဗြီဒီယို ၾကည့္ျခင္းေတြကေန သင္ခန္းစာရတတ္သလို၊
ကိုယ္လုပ္မိတဲ့ အမွားကေနလဲ သင္ခန္းစာ ရႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ .. သင္ခန္းစာကို စိတ္ထဲမွာပဲ မထားမိဖို ့အေရးၾကီးပါတယ္။
လူအမ်ားစုက ရလိုက္တဲ့ သင္ခန္းစာကို စိတ္ထဲမွာ ပဲ ထားတတ္ပါတယ္။
စိတ္ထဲမွာ ပဲ ထားေတာ့ .. အဖိုးတန္တဲ့ သင္ခန္းစာက ၂၈ ရက္အတြင္း တျဖည္းျဖည္းေမ့ေပ်ာက္သြားပါတယ္။
သင္ခန္းစာ ဆိုတာ ခ်ေရး ရပါတယ္။
ခ်ေရးထားတဲ့ မွတ္စုစာအုပ္ကို မၾကာခဏဆိုသလို ျပန္ဖတ္ရပါတယ္။
ဒီလိုလုပ္မွ … သင္ခန္းစာ ဆိုတာ ယူတတ္တယ္လို ့ေခၚပါတယ္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကေန ရတဲ့ သင္ခန္းစာဆိုတာ ရိွသလို၊ ေန ့စဥ္ လူေနမႈဘ၀မွာလဲ သင္ခန္းစာဆိုတာ ရိွပါတယ္။
သင္ခန္းစာဆိုတာ …အဖိုးတန္တယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာခ်ေရးထားပါ။
ယူတတ္မွ … ရပါတယ္။